Bal Eeg Waxa Kudhacaya Madaxweyne Donald Trump Oo Jeex Basal ah lalatar tansiiyay | afrikada news online
Bal Eeg Waxa Kudhacaya Madaxweyne Donald Trump Oo Jeex Basal ah lalatar tansiiyay
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmaya cadaadis xoogan oo uga imaanaya shacabka aan taageersaneyn ee dalkiisa. Haatan arrintu waxay mareysaa in lala tartansiiyo JAB BASAL ah.
Weliba JABKAAS BASASASHA ah ayaa Donald Trump ku garaacay mareegaha caanka ah ee Twitter iyadoo looga macaamiil badiyey. Warbaahinta ayaana si weyn uga hadashay arrintaan maadaama kooxda akoonka u sameysay BASASHAAN ay markii hore ballan qaadeen inay ka adkaan doonaan Trump isla markaana ay muujin doonaan sida uu ugu taageero liito gudaha Mareykanka iyo daafaha caalamka.
Guud ahaan, madaxweyne Donald Trump ayaa in ka badan 22.4 milyan oo taageereyaal ah ku leh mareegaha Twitter waqti xaadirka aan warbixintaan qoreyno. Laakiin madaxweynaha 45aad ee United States wuxuu taageereyaasha ugu badan helay inta uusan xilkaan qaban.
Marka loo barbardhigo BASASHAAN oo kusoo biirtay Twitter 20kii bishaan Janaayo isla markaana uu akoonkeeda maamulo shaqsi aadane ah, waxay heysataa 667 kun oo taageereyaal ah waqtigaan aan idinla hadleyno, waxayna ka badan tahay akoonka rasmiga ah ee Donald Trump tan iyo markii uu xilkaan qabtay.